Iprofayile yenkampani - iJiangsu ezintathu zeegusha zegadi zeemveliso Co., Ltd.
Yasekwa ngo-2014, Shenzhen Enimei Technology Development Co., Ltd. izibophelele kakhulu ekuveliseni izixhobo zobuhle ezi-smart, ezibandakanya uphando kunye nophuhliso, ukuyila, ukuthengisa, ukuthengisa kunye nokuthengisa isixhobo esihle kwihlabathi liphela. Sinikezela uluhlu lweemveliso zokusika kubandakanya ibrashi yokucoca ubuso, isikhumba esikhonkxayo ebusweni, umenzi wemaski, ibrashi yokubumba yombane, isikhupha esimnyama kunye nokunye.
Kunye nesebe lethu lobugcisa kunye nelebhu yokuvavanya, kunye nobuchule bobuchwephesha kunye namava okuvelisa iR & D, siphumelele ngaphezulu kwamalungelo awodwa omenzi wechiza kubuchwephesha bobuhle kunye noyilo lwembonakalo, Ngaba lishishini lobuchwephesha kwiSixeko saseShenzhen. Sineofisi kwi-300 yeemitha zesikwere kunye nobukhulu befektri ngaphezulu kwe-1400 yemitha yesikwere. Ngomgaqo wamazwe aphesheya, onobunkunkqele, oqeqeshiweyo nolusebenzayo, sinikezela ngenkonzo enye yejoka ukusuka kwi-R & D, ukuvelisa kwintengiso, kunye nakwimpawu zethu ukuya kwi-ODM ne-OEM.
Inkampani yethu iseke inkqubo yolawulo ngokungqinelana nemigangatho yomgangatho wamanye amazwe: i-ISO 9001: 2015, kwaye yaphumelela isatifikethi semveliso yeCCC, i-CE, iROHS, i-FCC, i-PSE njl.
> Uphuhliso lweBrand ye-ENIMEI: Ukuphuhlisa, ukukhuthaza kunye nokuthengisa ubuhle kunye neemveliso zokhathalelo lobuqu phantsi kwethu Uphawu lokuthengisa, PHILBABY, INAMEX, BEAUTYFULL STAR
> Imiyalelo ye-OEM / ODM / OBM: Nika imveliso yokubeka uphawu elungelelanisiweyo kunye noyilo lwephakheji, ukongeza ixabiso kwimveliso yokuqala
> Iarhente yoGunyaziso loThengiso loMthengisi: Iarhente yokuGunyazisa uMthengisi yeArhente yeemveliso ezithile kumazwe athile
Umzi mveliso wethu, ukuhanjiswa ngexesha, kwaye sihlala sinyanzelisa iimfuno ezingqongqo kumgangatho weemveliso zethu ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Kwilonke ibhetshi yeempahla, uhlolo olucokisekileyo lwenziwe zii-QC zethu ngaphambi kokuba zithunyelwe. Ngengxelo nganye yabathengi, siya kulandelela kwaye sibanike ezona zisombululo ziyanelisayo.
Ukuphucula ngcono intengiso yethu, sihlala sisebenza ukufaka iintlobo ezahlukeneyo zokuvunywa kunye neempawu zorhwebo kwiimveliso zethu eziphambili, ukuze sanelise iimfuno kumazwe ahlukeneyo.
Ngaphezu koko, sinamathela ekuthatheni inxaxheba kwiintlobo ezahlukeneyo zorhwebo lwamanye amazwe ukuze sikwazi ukunxibelelana nabathengi bethu ubuso ngobuso, kwaye sazane ngcono. Okwangoku, sijoyine amaqonga ezorhwebo awaziwayo e-B2B kwaye besisoloko sibonisa ngezixhobo zethu kwi-intanethi, ukwenzela ukuba abantu abaninzi bazi ngakumbi ngathi.
Siya sisiba sithandwa ngakumbi ngenxa yomsebenzi wethu kunye nokugxila. Siza kuhlala sihleli, sizinikele kwishishini lobuhle ukubonelela ngeemveliso ezingcono kunye nenkonzo egqibeleleyo.